11 Nzira Dzakaedzwa Kuita Mari Pamhepo - TMC App
11 Nzira Dzakavimbiswa Kuita Mari Pamhepo
# 1. Iva Freelancer
Kana iwe uri akanakisa dhizaini, mugadziri kana nyanzvi yekushambadzira saka iwe unogona kuwana yakawanda yakabhadharwa painternet mabasa muIndia. Iwe unongoda kuve munhu uye wakagadzirira kuwana zvimwe. Freelancing ndiyo yakanyanya kunaka nzira dzekuwana mari pamhepo pasina chero kudyara kana uine hunyanzvi hunodiwa.
Iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi huviri kuti upedze kuve mubatsiri mukuru. Imwe hunyanzvi hwako hwepakati, uye hunyanzvi hwechipiri kushambadzira. Kana iwe usiri nyanzvi yekushambadzira yakanaka, mushure meizvozvo tsvaga rubatsiro kubva kune ane ruzivo rwekushambadzira nyanzvi kuti uite yako mbiri. Iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi hwekutaurirana kugona kuwana vatengi.
# 2. Dzidza Securities Market Trading
Iwe haudi chero rudzi rwemari kuti utange basa rekuzvimiririra asi iwe unongoda kamari kadiki kuti utange basa rako sewe stock investor.
Unogona kuwana mari online nekuita zvekutengesa kana uchingoziva kusarudza kwakakodzera stock. Unoda dema & yekutengesa account kuti utange kutengesa.
Ini ndinofanira kuita kuti uzive kuti unogona kurasikirwa nemari mukutengesa zvekutengesa zvirinani kutanga nemari shoma uyezve kushandisa imwe nguva yakawanda mukutsvaga zvakakosha zvekutengesa masheya.
Ini ndakanyora kunyora pamusoro pekutengesa kwe intraday muIndia kune vatsva. Iwe unogona kuongorora kunyora-up kana iwe uchida kuwana zvakakosha zvekutengesa masheya.
# 3. Huya uve Nyanzvi
Iwe unogona kutengesa mazano ako uye zvakare kunzwisisa kune vanhu vazhinji. Iwe haufanirwe kuve inoshamisa nyanzvi mune rimwe zita rezita kuti uve nyanzvi kana murairidzi, iwe unongoda kuve nani zvakanyanya kupfuura wako mudzidzi kana mutengi.
Ndakawana kushambadzira kwewebhu zvemukati uye kugona kushambadzira nekubatana neakawanda ekutanga. Dzimwe nguva ndaiwana kubudirira pamwe nekutadza kazhinji, nekutadza kwese ndaiwana chimwe chinhu chitsva mukushambadzira kwewebhu. Ikozvino vanhu vanondidaidza kuti mushambadzi wemukati uye vanondibhadhara nemufaro maRs. 5000 paawa yemazano angu pafoni/skype.
Ini ndinovabatsira mukugadzira zvinhu zvekushambadzira uye kushambadzira zano. Ivo vanowana bhizinesi rakatowanda nekumhanyisa mapurojekiti ari nani ekushambadzira.
Chero munhu ane hunyanzvi hunodhura anogona kuuya kuzove nyanzvi uye zvakare kutsvaga vatengi online. Semuenzaniso, kana iwe uri nyanzvi yezvemutemo kana yezvemari, saka unogona kugadzira yako saiti, uye zvakare tanga kuunza vatengi online.
Unogona kuita mari hunyanzvi hwako huripo, kana kutsvaga hunyanzvi hutsva hunounza mari online.
Usatarisira kuita mari nekukurumidza pasina kuve nehunyanzvi.
Ndiri kuzvitaura zvakare, Zvinogoneka kudzidza painternet hunyanzvi mumwedzi mishoma yenguva yakatsaurirwa.
# 4. Wana Mari yepamhepo kubva kuYouTube
Iwe unogona kunge usiri kuziva kuti vanhu vari kuita mamirioni kubva kuyoutube. Zvekare, isiri sarudzo iri nyore, asi inogoneka kune chero munhu anogona tepi & kuendesa mavhidhiyo zvimedu pane chaiyo nyaya.
2 rudzi rwevanhu runogona kuita anoshanda YouTube network, uyo anoita zvinosekesa & zvinovaraidza mavhidhiyo zvimedu, wechipiri anogona kugadzira anonyanya kubatsira emavhidhiyo eimwe niche musika wakanangana (sevanodzidzira, vanaamai, vakadzi vemumba, tech nerds).
# 5. Gadzira Mari kubva kuFacebook, Instagram
Iko hakuna kurambidzwa kuita mari kubva ku Instagram, Facebook, uye Twitter. Hei, handisi kutyora majee. Kune vanhu vakatenderedza vanobhadharisa mari inosvika zviuru makumi maviri zvemarupees kune imwechete tweet kana Facebook meseji. Zvino vhara muromo wako, ichokwadi.
Hedzino dzimwe nzira dzandinoziva, kuita mari neFacebook. Ini pachangu ndakabhadhara mari ndakananga kune admins kusimudzira zvangu zvirimo pamapeji eFacebook (kwete kuvhiringika neFacebook kushambadzira).
Iyo social media fan base ndeye vanhu vakadai, ruzhinji rwavo runoramba rwuri munzvimbo yekunakidzwa. Vanhu vakabatana nesitayera uye zvakare varaidzo domain zita vanogona kuita mari yavo Instagram peji rewebhu. Iwe unogona kuongorora hwaro hwevateveri veBhakSala, Gabbar Singh uye zvakare StoryPick, uye zvakare unogona kufungidzira kuti izvo zvingave zvakakosha sei kune chero mhando yefemu inoda kushambadza pamapeji akadai ewebhu.
# 6. Wana & Tengesa Domains
Iwe unogona kunge usingazive zvakadaro iwe unogona kuhaya webhusaiti yako kana uine yakanaka traffic. Ndakawana iyi nzira yekuita mari yepamhepo pandakanga ndichishanda nemutengi mune real estate domain name. Panzvimbo pekuvaka webhusaiti yake kubva pasi, akahaya saiti kubva kumunhu akange aine traffic yewebhu, nevanhu vanoda kuziva nezvekutenga imba munharaunda yekwaanogara.
Shamwari yangu yanga isingade kuziva nezvekutora webhusaiti yake, saka yakakumbira kuti itore saiti yake yepaindaneti pakurojesa kwemwedzi mishoma. Akaunganidza zvinotungamirira nokuratidza zvivako zvake panzvimbo yacho. Akadzosa webhusaiti mushure mekutengesa pfuma yake.
Hazvifadzi here? Hupenyu hwedu hwese taifunga kuti nzvimbo dzebasa chete nedzimba dzinogona kubhadharwa.
Iyo imwe sarudzo iri kupa yako domain kana iwe uine yakanakisa yekutsvaga injini optimization mamakisi (Domain zita Chiremera) kana uine zita rezita rine zita rakakosha. Yandinofarira masocial network kuronga kambani, barriers, yakatenga buffer.com mu $600,000 muna 2014. Nenzira inofananidzwa, unogona kuwana madomasi akapera uye zvakare kutengesa nemutengo wakakwira kune vanhu vanoda izvozvo. Honestly, domain name yekutengesa sevhisi inonetsa uyezve iwe unofanirwa kuve nyanzvi kunyangwe kutanga, zvikasadaro, unogona kudurura mari.
Nekudaro, kana iwe uchinge uine zita rezita uye usingarishandise, unogona kuedza kutengesa pamisika seFlippa.com.
# 7. Mari kubva Kugadzira Basa.
Handina kumbofunga kuti ndichazombofa ndakapedzisira ndava munyori. Ndakatanga kunyorera yangu yekutanga-up blog saiti pamwe nekuwana chinongedzo nemazwi.
Kutendeseka, handina kumbobvira ndaita Chirungu chakanaka uye ndichiri kushandira kuwedzera girama yangu. Nhasi, mazhinji emakambani angu anomhanya zvichienderana nekugona kwangu kugadzira.
Ndakadzidza kuti dzidzo yepamutemo uye kudzidza hazvidiwi kuti uve nyanzvi pane chero basa.
Kana iwe uchida kuumba, mushure mezvo ingozvitanga. Kune akawanda nyanzvi anowanikwa zviri nyore pamhepo anoda kukuratidza iwe kugadzira makopi akanaka.
Nditendei, mabhizinesi mazhinji ari kutsvaga vanyori vakanyanya asi zvakaoma kuwana vanyori vanonyora nemazvo. Unogona kuva anotevera. Munyori akanakisa mubhadharo pakati pe5,000 Rs kusvika 20,000 Rs pachinyorwa chipfupi.
# 8. Kutanga Blogging Kuita Mari Online.
Iwe unogona kuwana mari kubva kune yako yekugadzira hunyanzvi munzira mbiri.
Bata mumwe munhu uye uwane mari nekukurumidza.
Gadzira wega uye gadzira mari zvishoma nezvishoma, zvisinei nguva dzose.
Ndiwo mutsauko uripo pakati pebasa rekuzvimiririra uye kuva nesevhisi. Yako blog inogona kunge iri bhizinesi rako repamhepo, zvinozotora nguva kuvandudza vateereri vako. Ukangotanga kuwana mari kubva kublog, mushure meizvozvo bhurogi rako rinogadzira mari zvakare paunenge uchizorora.
Iwe unogona kugadzira Ads uchishandisa yakapusa Google Adsense uye kugadzira mari negoogle. Iwe unoita mari pese paunodzvanya paAdvertisement Blocks akadaro.
# 9. Wana Mari neAssociate Marketing.
Kutanga kushambadzira kushambadzira uye kushambadzira kwakafanana nekumhanyisa chitoro chezvitoro. Iwe unosaina nevatengesi vakaita seAmazon.com uye zvakare Flipkart, simudzira zvaunofarira zvinhu pane yako saiti uyezve social media kuita mari inoremekedzeka.
Ndiri kukurukura nezvekushambadzira kushambadzira seimwe sarudzo sezvo ichikwanisa kuenderana nechero mhando pawebhusaiti, mune mamwe mamiriro vanhu havana zvakare webhusaiti asi vachigadzira mari kuburikidza neAffiliate kushambadzira uye kushambadzira.
Ndakangorongedza rondedzero yemabhuku angu andinofarira uye zvakare akabatana neAmazon.com kuona kuti vanhu vanofarira vanokwanisa kutenga mabhuku.
Vanhu vatatu vakawana pazuva rimwe chete uye iniwo ndakawana mubhadharo wekubatana. Kana mumwe munhu angangosvika kumazon.com webhusaiti nekudzvanya link yako.
# 10. Kutanga Chigadzirwa Kutanga.
Ndiyo imwe yedzakanakisa uye ine mari nzira yekumhanyisa sevhisi yepamhepo. Ndakamira kushanda kune maviri ekutanga-ups asi ndakawana budiriro pakushambadzira zvemukati. Iwe haumbofi wakanzwisisa chaizvo kuti kutanga-up kunogona kubatsira sei mukukura kwako.
Iwe unofanirwa kushanda nesimba kugadzira chinhu icho vatengi vanoda kutenga. Maitiro ese ekutanga kambani yechigadzirwa, kushandisa boka, kutengesa chinhu chinoshamisa chaizvo.
Kune musika wakakura munzvimbo yezvemari yega, unogona kutanga firm kana bhurogu saiti kufambisa kukweretesa vanhu vane yakaderera kiredhiti kiredhiti, kana kupa muganho wechikwereti kune vanhu vane yakakwira kiredhiti.
Kune akawanda mashandisiro emamiriro ezvinhu muIndia, UK pamwe neUSA kuti utarise zvakanyanya.
# 11. Vhura Dhijitari Shop (Shopify, Woo-Commerce kana Misika).
Iwe unofanirwa kunge uine zvimwe zvigadzirwa mupfungwa zvekutengesa painternet shopu- zvinogona kunge zvemagetsi, zvishongo zvekugadzira kana mahengechepfu.
kutenga zvinhu zvakare.
Nguva Yekuita Basa.
Ndinogona kuramba ndichigovana ruzivo asi hapana chinokubatsira iwe kusvika watora chiitiko. Vanhu vanotya kufoira uye hapana chavanotanga.
Tora danho rekutanga uye iwe uchaona chiedza mberi.
Vamwe vari kuverenga:AppleunlockTmc appAppleunlockerSpymaster proVolte sip meseji sms kubata uye kuteereraMaitiro ekuona chiitiko pane yako routerNu votNyika dzaunogona kushanyiraAyiwwmqzBhjkwuyv